ဒူဘိုင်းသို့လာ | အလုပ်များ - အလုပ်ရှာဖွေရေးခရီးသွားခြင်းသင်၏စီးပွားရေးဘ ၀ ကိုအရောင်အသွေး - Expat ဖြစ်လာသည်
ကျိန်းသေကျနော်တို့လုပ်နိုင်, ယူအေအီး၌, ဒူဘိုင်းထံသို့လာကွ အသစ်တစ်ခုကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသို့သငျသညျကိုစတင်ရန်, သင်ကမျက်နှာသစ်လျှင်။ သင်သည်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးနှင့်သင့်အလုပ်တပုဒ်ကိုထိုသို့၌ရှိကြ၏လျှင်, ငါတို့သည်, သင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးနိုင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းအဆုံးတွင်သင်သည်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်စေကူညီပေးနိုင်ပါသည် သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင့်အသက်တာ၏အထူးပိုပြီးငြိမ်းချမ်းသောအချိန်တွင်နှင့်အတူအပြေးသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခံစားနိုင်မယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုရှာဖွေပေမည်။
စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကလုပျနိုငျ! ကျနော်တို့အဲဒီမှာပါပြီနှင့်တကွလူအပေါင်းတို့ကိုရှောကျသှားသောကွောငျ့အကြှနျုပျတို့သညျကိုကူညီနိုငျ ချွေးနှင့်ခက်ခဲ ငါတို့မွို့ကယနေ့သည်အံ့သြဖွယ်မြို့စေသည်အလုပ်။ စော်ဘွားအတွက်ကျွန်တော်တို့ကို join: ပြောင်းလဲမှု၏တံခါးပေါက်!
ကျွန်တော်တို့ကိုသင်၏ CV ကိုပို့ပါ
ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြပါစို့။ UAE- အတွက် We- ရှိပါတယ် သငျသညျမှအဓိပ္ပာယ်ပြည့်သောအလုပ်၌သင်တို့ကိုနေရာချကူညီရန်။ DCC မှလူကြီးမင်း၏ CV ကို Send ထိုအခါငါတို့တှငျအစဉ်မပြတ်နေတဲ့အချိန်တစ်ဦးကိုသင်၏အောင်မြင်မှုသို့မှန်မှန်ခရီးမှာ that- တဦးတည်းခြေလှမ်းစတင်ရန်နှင့်ငါတို့ဥစ်စာကြကုန်အံ့။
သငျသညျအဟောင်းများကို get အဖြစ်အိပ်မက်များကိုရပ်တန့်ကြဘူး: ပညာကိုသတ်မှတ်ရည်မှန်းချက်မ။ ။ အိပ်မက်များသင်ကဲ့သို့အဓိပ္ပါယ်ရည်မှန်းချက်များဖြစ်လာ တသမတ်တည်းသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုး။ ရွေးချယ်မှုများ၏ကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်တစ်ဦးထက်ပိုပြည့်စုံရှင်းလင်းစွာလမ်းကြောင်းမှရှေ့ဆက်သင်တွန်းအားပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို repaint ကြစို့ သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘဝ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုမှု Make အစိုင်အခဲအတှေ့အကွုံ ဒီအဖြစ်အနှစ်တလျှောက်လုံးယူအေအီး၌အကြှနျုပျတို့၏အများအပြားအပြိုင်အဆိုင်အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်အခြစ်ရာကနေစတင်ခဲ့ဘဝကိုအရာမှနှုတ်ဆောင်ပြီးတော့သွား၏ အသစ်ကလယ်ကွင်းစူးစမ်းဖို့ထက် ကျော်လွန်.။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင်တို့နှင့်အတူအကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာမျှဝေဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
"သင်၏အလုပ်ကြွယ်ဝကြောင်းရွေးချယ်မှုတစ်ခုကျယ်ပြန့် Explore ။ ယနေ့ Apply! "
အဆိုပါ စီးတီးကုမ္ပဏီကျွမ်းကျင်သူများရန်ကူညီပေးနေလက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များရရှိရန်သင်ကူညီပေးဖို့မျှော်လင့်နေကြသည်ကျနော်တို့ပေးနေကြတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏အံ့သြဖွယ်စီးတီးအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်။
ဒူဘိုင်းမှ CV ကို Upload လုပ်ပါ - https://www.dubaicitycompany.com/upload-resume/
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်များအတွက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ယူအေအီးလမ်းညွှန်များအတွက်ဂျော့ဘ်။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်ကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရရှိနိုင်သည်။